प्रेममा डुब्न गहिरो प्रेम हुनुपर्छ - विचार - साप्ताहिक
प्रेममा डुब्न गहिरो प्रेम हुनुपर्छ
म धर्म गुरु हुँ तर बजारमा देखिने तथाकथित धर्म गुरु जस्तोचाहिँ होइन। एउटा अर्थमा तिमी मलाई प्रेम गुरु पनि भन्न सक्छौ। संसारभरिका धर्म गुरुहरूले नारी–पुरुषका प्रेमलाई गाली गरे। धेरैले नारीलाई भिन्दै र पुरुषलाई भिन्दै सन्यासी बनाए। कतिपयले त नारीलाई सन्यासी बन्नबाट समेत रोके। मैले दुवैलाई सन्यास दिएँ। दुवैलाई सँगै बस्ने अनुमति दिएँ। त्यतिमात्र होइन, दुवै यदि शारीरिक सम्पर्क राख्छन् भने पनि त्यसलाई रोकिन। धेरैले त्यसको विरोध गरे। मेरा सन्यासीहरूलाई जति दु:ख दिन सक्थे, दिए। संसारभरबाट मलाई गालीका पत्रहरू आउँछन् र त्यसमा धर्मलाई भ्रष्ट बनाएको तर्क गरिन्छ। त्यस्ता नासमझ व्यक्तिहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यद्यपि मैले मेरा सन्यासीहरूलाई त्यसको कारण के हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ।
प्रेम के हो? सबैभन्दा पहिले त्यो बुझ्नुपर्छ। जीवनको ऊर्जा या त प्रेम बन्छ या त्यो ऊर्जा भयमा रूपान्तरण हुन्छ। दुनियाँका धर्म गुरुहरूले भयका माध्यमबाट ईश्वरतर्फ लाने प्रयास गरे। भयका माध्यमबाट कोही ईश्वरसम्म पुग्न सक्छ? भयले मानिसलाई ईश्वरसम्म पुर्‍याउन सक्छ? भयले प्रतिरोध जन्माउन सक्छ तर भयले मुक्ति दिन सक्दैन। भय त विष हो, चाहे त्यो विष परमात्माले दिएको भाँडोमै किन नराखिएको होस्। त्यसैले यो संसारको हजारौं वर्षको आयुमा हजारौं धर्मगुरु देखा परे तर विश्व धार्मिक हुन सकेन। संसार सुन्दर हुन सकेन, प्रेमील हुन सकेन। यसको कारण मानिस आत्मिक हुन नखोजेर होइन, उनीहरूलाई धार्मिक बन्न दिइएन। आश्चर्य नै हो, यस्तो अवस्थामा पनि कसरी एक–दुई व्यक्ति प्रेमील र धार्मिक हुन पुगे। उनीहरू कसरी धर्म गुरुको प्रभावबाट जोगिए, त्यो सम्झँदा नै मलाई अचम्म लाग्छ।
धार्मिक गुरुहरूले भने, ‘संसारलाई घृणा गर तर परमात्माको डर राख। त्यसो भयो भने तिमीले आफ्नो आचरण पालन गर्न सक्छौं र ईश्वरले तिमीलाई माया गर्नेछन्।’ यसो भन्नुको अर्थ बालबालिकालाई अँध्यारोमा हिँड्न रोक लगाउन आमा–बुवाले बाहिर भूत छ भनेर डर देखाए जस्तै हो। बाहिर भूत छ कि छैन, त्यो आमा–बुवाको सरोकारको विषय हुँदै होइन। छोराछोरी वाहिर नजाऊन् भनेर भूतको कुरा गरिएको भन्ने कुरा बालबालिकालाई थाहा हुँदैन। हाम्रा धार्मिक गुरुहरूले मानिसलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सधैं संसारलाई घृणा गर्न सिकाए र ईश्वरको भय मनमा राखिदिए, आमाबुवाले शिशुलाई बाहिर भूत छ भनेजस्तै।
एउटा सामान्य कुरा, जसले संसारलाई घृणा गर्छ, ऊ संसारमा कसरी खुसी रहन सक्छ। मेरो भनाइ छ, यो संसारलाई माया गर। यहाँका सबै राम्रा कुरालाई माया गर। राम्रा स्त्री–पुरुष, सम्पत्ति एवं सौन्दर्यलाई माया गर अनि यी सबै बनाउने ईश्वरलाई पनि प्रेम गर। जसले यो संसार र यसका राम्रा पक्षलाई माया गर्न सक्दैन, उसले कसरी ती सबैलाई माया गर्छ? तिमी कसरी भन्न सक्छौ, हे परमात्मा, म तिमीलाई प्रेम त गर्छु तर तिमीले बनाएका सबै कुरालाई घृणा गर्छु। यो त साह्रै अज्ञानी कुरा भयो। तिमी कुनै पुस्तक वा चित्र मन पराउँछौं तब मात्र तिमी त्यो व्यक्तिको खोजी गर्न थाल्छांै, जसले यी कुरा सिर्जना गरे। तिमीले कुनै लेखक वा चित्रकारलाई कसरी भन्न सक्छौ, म तिमीलाई त माया गर्छु तर तिम्रो सिर्जनालाई घृणा गर्छु। छक्क पर्नै पर्दैन, हाम्रा अधिकांश गुरुले धर्मका बारेमा यस्तै वाहियत कुरा गरेका छन्। सृष्टिलाई माया नगरी कसरी श्रष्टालाई मात्र माया गर्न सकिन्छ? त्यसैले म पहिले कवितालाई माया गर्न सिकाउँछु अनि विस्तारै कवितर्फ इशारा गर्न थाल्छु।
मैले आम मानिसको प्रेमलाई महत्व दिनुको कारण पनि यही हो। एउटा पुरुष वा युवकले कुनै स्त्री वा युवतीलाई जसरी प्रेम गर्छ, त्यसले विराट प्रेमको झलक दिन्छ। कुनै महिलाले आफ्नो प्रियतमलाई जसरी प्रेम गर्छे, त्यसले शास्वत प्रेमतर्फ इसारा गर्छ। तिमीले याद गरेका छौ, जब कुनै युवतीले कुनै पुरुषलाई प्रेम गर्छे, उसले आफ्नो प्रेमीलाई सबैथोक मानिरहेकी हुन्छे। आफ्नो सारा जीवन उसैलाई समर्पण गरिरहेकी हुन्छे। त्यति बेला त्यो प्रेमी पुरुष रहँदैन, महापुरुषमा परिणत भैरहेको हुन्छ। अरुका लागि ऊ सामान्य व्यक्ति हुन्छ तर प्रेमीकाका लागि ऊ महान सम्राट हुन्छ। एउटा सामान्य व्यक्तिमा सम्राटको झलक पाउनु नै प्रेमको महानता हो।
रामकृष्ण परमहंश बेला–बेलामा एउटा प्राचीन कथा सुनाइरहन्थे। त्यो कथा मलाई पनि प्रीतिकर छ। एकपटक एकजना मुसलमान सम्राट आफ्नो मन्त्रीसँग कुनै कारणवश असाध्यै रिसाए, जस्तो सम्राटहरूको स्वभाव हुन्छ। उनले ती मन्त्रीलाई आफ्नो सबैभन्दा अग्लो मिनारको माथिल्लो खण्डमा बन्द गरिदिए। मन्त्रीसँग वाहिर निस्कने कुनै विकल्प थिएन। माथिबाट हामफाल्यो भने ज्यान जान सक्थ्यो, वाहिर आउने सम्भावना थिएन, कारण तल आउने सिँढीको माथिल्लो खण्डमै भोटे ताल्चा लगाइएको थियो। मन्त्रीकी श्रीमतीले राजासँग हारगुहार गरिन् तर उनको केही लागेन। अन्तत: उनी सहरबाहिरको सानो कुटीमा बस्ने एक साधुसँग समस्याको समाधान माग्न पुगिन्। साधुले टाढैबाट देखिने अग्लो मिनारतर्फ इसारा गर्दै भने, ‘यो सामान्य खालको मिनारबाट निस्कन सम्भव छ, किनभने म त्यो भन्दा अग्लो मिनारमा कैद थिएँ।’
‘के तपाईं पनि मिनारमा कैद हुनुहुन्थ्यो?’ ‘मिनारमा त होइन तर कैद थिएँ, मिनारभन्दा अग्ला धेरै कुरामा कैद थिएँ।’ ‘कसरी निस्कनु भयो? तपाईं जसरी कैदबाट निस्कनुभयो, त्यसैगरी मेरो श्रीमान्लाई पनि निकाल्नु पर्‍यो।’ मन्त्री पत्नी रुन थालिन्। ती साधु कुटी बाहिर निस्किए। केही क्षणमै फर्कंदा उनको हातमा एउटा किरा थियो। उनले किराको खुट्टा पातलो रेसमको डोरोले बाँधिदिए। कीराको नाकको छेउमा कुनै भक्तले चढाउन ल्याएको मह दलिदिए। त्यसपछि रेशमको धागोको डल्लो दिँदै मन्त्री पत्नीलाई साधुले भने, ‘तिमी मिनारमा जाऊ र मिनारको भित्तोमा यो किरालाई छाडिदेऊ। उसको खुट्टामा बाँधिएको रेशमको धागोमा यो धागो गाँसिदेऊ।
कीरा आफ्नो नाकमा आइरहेको महको गन्ध पच्छाउँदै माथि चढ्छ। अब यो धागोमा अलिकति मोटो धागो गाँसिदेऊ। कीरा माथि चढ्दै जान्छ। माथि पुग्ने बेला अर्को मसिनो डोरी त्यसमा गाँसिदेऊ। जब तिम्रो पतिले रेशमको धागो बोकेर उक्लिएको कीरा फेला पार्छ, उसले विस्तारै त्यही डोरीबाट तिमीले बाँधेको धागो र डोरी भेट्छ। त्यही डोरीको सहाराले तिम्रो पति मिनारबाट कैद हुनेछ। नभन्दै मन्त्रीकी श्रीमतीले त्यसै गरिन र आफ्नो श्रीमान्लाई कैदबाट छुटाइन्। रामकृष्ण भन्थे, यो संसार किराको खुट्टामा बाँधिएको मसिनो डोरी जस्तै हो। अहिले तिम्रो प्रेमको डोरी यस्तै मसिनो छ। यही प्रेमका कारण संसार बाँच्न लायक भएको छ। यसले तिम्रो दु:खलाई सम्हाल्ने शक्ति दिएको छ। हाम्रा धर्मगुरुहरू तिमीले समातेको त्यही प्रेमको धागो पनि छाड भन्छन्। म भन्छु कदापी नछाड। तबसम्म नछाड, जबसम्म तिमीले भरपर्दो अर्थात् मोटो ईश्वरीय डोरी फेला पार्दैनौ।
अर्को कुरा पनि छ। मैले यो प्रेमलाई स्वीकार गर, यही प्रेम महत्वपूर्ण छभन्दा तिमीलाई यही नै अन्तिम सत्य रहेछ भन्ने पर्न सक्छ। फेरि म गलत रूपमा ब्याख्या हुन सक्छु। यो प्रेम ठीक छ भन्नुको अर्थ यो नै अन्तिम प्रेम हो भन्ने होइन। पहिले यो प्रेम बुझ, यसका राम्रा पक्ष महसुस गर तर विस्तारै यो प्रेमले तिमीलाई अझ गहिरो प्रेमको भोक लगाउँछ, त्यतिबेला तिमी आफ्नी प्रेयसीलाई पनि धन्यवाद दिन्छौं, आफ्नो प्रेमीलाई धन्यवाद दिन्छौं। त्यसपछि तिमी अझै गहिरो प्रेमको खोजीमा निस्कन्छौं।
पहिले संसारको प्रेम र त्यसबाट पाइने सन्तुष्टिको अनुभव भएपछि मात्र मानिस वास्तविक प्रेमको खोजीमा लाग्छ। प्रेमको अनुभव गर्नै नपाएको मानिसलाई शाश्वत प्रेम हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकिँदैन। म पटक–पटक भन्छु, ‘नारी पुरुषको प्रेम एक लोटा पानी हो। यो कुनै पनि बेला रित्तिन सक्छ तर ईश्वरीय प्रेम सङ्लो नदी हो। यहाँ निरन्तर प्रेम बगिरहेको हुन्छ। जबसम्म तिमीले प्रेमको सानो स्पर्श अनुभव गर्दैनौ, तिमीलाई धर्मगुरुहरूले भन्ने प्रेम वकवास लाग्छ। तिमी तिर्खाएका छौं, तिम्राअघि एक लोटा पानी छ भने पिइदेऊ। यो गलत हो कि सही हो भन्ने चिन्ता नगर। जब त्यो पानीले पनि तिमीलाई तृप्ति दिँदैन, त्यति बेला बुझ, तिम्रा लागि अरू कतै प्रेमको पोखरीले नै कुरिरहेको छ।
स्त्री–पुरुषको प्रेमको चर्चा गर्दा मलाई रामकृष्ण परमहंस र शारदाको प्रेम सम्झना आउँछ। रामकृष्ण शारदाका लागि साक्षात ईश्वरीय रुप थिए। उनका चेलाहरूले पनि उनलाई साक्षात इश्वर मान्थे। उनको एउटा दैनिकी थियो। विहान नित्य कर्म सकेर रामकृष्ण आफ्ना चेलालाई प्रवचन दिन्थे। १० वजे खाना तयार भएपछि शारदा उनलाई बोलाउन आउँथिन्। खाना खाउन्जेल उनी पंखा हल्लाएर बस्थिन्। खाना खाएपछि लोटा बोकेर हात चुठ्ने ठाउँमा पुग्थिन्। उनले रामकृष्णलाई ‘परमहंस’ भनेर सम्बोधन गर्थिन्। यसरी एउटा प्रेमील जीवन चलिरहेको थियो।
रामकृष्णलाई एकपटक घाँटीमा समस्या भयो। डाक्टरले चेक जाँच गर्दा घाँटीको क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। क्यान्सर फैलिसकेको थियो। बाँच्ने उपाय थिएन। डाक्टरले सत्य कुरा बताइदिए। यत्रो वर्ष आनन्दपूर्वक रमाइरहेकी शारदा डाँको छाडेर रुन थालिन्। रामकृष्ण छक्क परे। उनलाई लागेको थियो, शारदाले उनलाई सच्चा प्रेम गर्छिन्, उनले त शरीरलाई पो प्रेम गरेकी रैछिन्। ‘तिमीले मलाई प्रेम गरेकी हौ कि मेरो शरीरलाई?’ रामकृष्णले भने, ‘मेरो शरीरलाई प्रेम गरेकी हौ भने ठिकै छ, बाँचुन्जेल मेरो सेवा गर। मरेपछि तिम्रो मप्रतिको श्रद्धा आफै हराएर जानेछ तर मलाई प्रेम गरेकी हौ भने यो श्रद्धा, यो प्रेम सधैं एक समान रहनेछ। म मरेपछि पनि मेरो श्रद्धा जस्ताको तस्तै रह्यो भने तिमीले कुनै पनि कुरा परिवर्तन गर्नुपर्दैन।’
केही समयपछि रामकृष्णको मृत्यु भयो। यति गम्भीर प्रेम गरेकी शारदाले रामकृष्णको मृत्युमा एक थोपा पनि आशुँ खसाइनन्। मानिसहरूलाई लाग्यो, शारदामा गम्भीर मानसिक आघात पर्‍यो। शारदाले चुरा फुटाइनन्, बस्त्र परिवर्तन गरिनन्। त्यतिबेला हिन्दु बाहुल क्षेत्रमा कुनै स्त्रीले यसो गर्नु अनौठो कुरा मानिन्थ्यो। शुभचिन्तकहरूले आघात अझ बढ्छ भनेर चुरा फुटाउन र स्वेत वस्त्र लगाउन कर पनि गरेनन्। भोलिपल्टदेखि शारदाले आफ्नो सेवा उसैगरी जारी राखिन्। विहान उनी रामकृष्णलाई ओछ्यानबाट त्यसैगरी उठाउँथिन्।
‘उठ्ने बेला भयो परमहंस, हेर्नुस् त भक्तजन आइपुगे।’ उनी भान्सामा एक–दुई घन्टा हराउँथिन् र रामकृष्णलाई मनपर्ने मिठा–मिठा परिकार पकाउँथिन्। १० बजेतिर भक्तजन बसेको स्थानमा पुग्थिन् र कुर्सीतर्फ फर्केर भन्थिन्, ‘खाना तयार भयो परमहंस, उठ्नु होस्।’ उनको त्यो दशा देखेर केही मानिस हाँस्थे र केही रुन्थे। ‘विचरी,’ सबैले भनिरहेका हुन्थे। उनी पस्किएको खानाअघि त्यसैगरी पंखा हल्लाउँथिन् र चुठ्न पानी लिएर चुठेल्नातिर पुग्थिन्। यो क्रम वर्षांै जारिरह्यो। केही मनोवैज्ञानिकले कतै उनलाई साच्चै नै मानसिक आघात परेको त होइन भनेर जाँचे पनि तर उनी पूर्ण स्वस्थ थिइन्। वास्तवमा रामकृष्ण मृत्युपछि पनि शारदाका लागि जीवित थिए। जो प्रेममा साँच्चै नै समर्पित हुन्छ, उसले मृत्युलाई पनि जित्छ।
भावानुवाद : अश्विनी कोइराला